June 19, 2016 – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
Posted on June 19, 2016 June 19, 2016 by Anand
एसएलसिको ८२ बर्ष लामो इतिहासमा पहिलो पटक यसको रिजल्टलाइ परिवर्तन गरिएको छ । अब देखि मार्कशिटमा प्राप्त नम्बरको सट्टा जिपिए स्कोर र ग्रेड दिन शुरु गरिएको छ । यो नयाँ रिजल्टले प्राप्तांकको आधारमा हुने रिजल्टमा बानिपरेका सबैलाइ अन्योलमा पारेको छ । अझ रिजल्टको आधारमा के पढन पाउने, के पढन नपाउने अनि सबैजना साँच्चिकै पास भएको हो त भन्ने बिभिन्न प्रश्नले धेरैलाइ पिरोलि रहेको मैले पाएको छु । तेसैले यस्ता केहि प्रश्नहरुको उत्तर दिन यो लेख तयार गरेको छु । सबै भन्दा पहिले
जिपिए भनेको के हो?
धेरै जसो कलेज र स्कुलहरुले बिध्यार्थिको रिजल्ट दिने पद्दति Grade Point Average (GPA) मा कुनै पनि बिषयमा बिध्यार्थिको ज्ञानको तहलाइ ० देखि ४ को बिचमा नम्बर दिइन्छ । खासमा यो पद्दतिले कुनै पनि बिध्यार्थिको कुनै बिषयमा औसत ज्ञान कस्तो छ भनेर देखाउँछ । जति धेरै जिपिए भयो त्यति राम्रो मानिन्छ र सोहि आधारमा राम्रो नराम्रो भनेर ग्रेड छुट्याउन ५ ओटा सम्म अक्षर (A, B, C, D, E अथवा F) को प्रयोग गरिन्छन । यहि ग्रेड र ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज को आधारमा माथिल्लो तहमा भर्ना पाउने नपाउने निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ ।
एसएलसिको जिपिएको बारेमा अन्यौल रहेको छ । एसएलसिको आधिकारिक वेवसाइटमा रिजल्ट मात्र राखिएको छ र कुनै पनि थप जानकारि राखिएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयको वेव साइटमा पनि कुनै जानकारि भेटिएन । सेतोपाटि अनलाइनमा प्राप्त जानकारि अनुसार एक भिडियो तयार गरेर पोष्ट गरेको छु (सेतोपाटि वेवसाइटमा)। तर, केहि प्रयोग कर्ताले सेतोपाटिको जानकारि गलत भएको पनि बताएका छन । आशा गरौंग् आधिकारिक जानकारि चाँडै प्राप्त हुने छ ।
किन जिपिए शुरु गरएको ?
Posted in के किन कसरी	| Tagged SLC	| 1 Comment